China Ucango lwentsimbi yegumbi lokucoca kumzi-mveliso woKutya okanye izithambiso/ushishino lokutya Ukwenziwa kunye neFactory | Ezong Iqela
Ucango lwentsimbi yegumbi lokucoca kumzi-mveliso wokuTya okanye izinto zokuthambisa / kumashishini okutya
kunye nesatifikethi se-CE
Uyilo olulodwa patent yoyilo
igumbi elicocekileyo / isibhedlele / ilebhu / isikolo / izinto zokuthambisa / amashishini okutya
Ngaphambi kokukhetha umnyango wakho ococekileyo, kufuneka ukhangele ukuba udonga lwakho luyipaneli yesandwich okanye udonga lwezitena.
Iindonga zebhodi ezicocekileyo zihlala zineenkcazo ezimbini.
Ukuzaliswa ngokuqhelekileyo kumagqabi omnyango yi-honeycomb ye-aluminium kunye ne-honeycomb yephepha
I-Doorhospital.com (iqela le-E-zong) linikezela ngesisombululo esipheleleyo esibhedlele, kwibhubhoratri, kwifektri yamayeza kunye nazo zonke iintlobo zegumbi elicocekileyo. Sinikezela ngeengcango ezikumgangatho ophezulu, iifestile, iiprofayili ze-aluminium, i-Aluminiyam yesilingi yomoya i-diffuser kunye neyunithi yebhedi yesibhedlele icandelo le-aluminium.Sinezintlu ezine eziphambili zeemveliso.
Ucango lwentsimbi kunye nomnyango weHpl wezibhedlele kunye nalo lonke igumbi elicocekileyo lezempilo, njengomnyango we-ospital swing, ucango olugungxulwayo, ucango lwemanyuwali okanye oluzenzekelayo lwe-hermetic kunye nocango lwe-X Ray.
Ifestile yokujonga, uyilo olungenamthungo kunye nephaneli yeglasi yokujonga ngokucacileyo.
Iprofayili yeAluminiyam eyongeziweyo / iprofayili ye-aluminium yekona yomgangatho kunye nokuhlanganiswa kwesilingi, ngakumbi kwilabhoratri yesibhedlele, umzi-mveliso wamachiza kunye nawo onke amanye amagumbi acocekileyo.
I-Aluminiyam yesilingi yomoya ye-diffuser yegumbi lokusebenza kunye nelinye igumbi elicocekileyo apho linemfuno engqongqo yomoya ococekileyo kunye nolawulo lomoya.
I-Aluminiyam ye-honeycomb inamandla okumelana nomlilo, ukuxhathisa ukunyanzeliswa, ukuxhathisa ukufuma kunye nokumelana nezinambuzane kune-honeycomb.
4. Nceda udlule ngomnyango ococekileyo ngokulandelelana, nceda unganyanzeli emnyango xa ucango luza kuvala okanye xa umnyango uvaliwe, qiniseka ukuba udlula emnyango xa umnyango uvulekile ukuvumela abantu abangaphezu komnye. .
5. Abantwana abangaphantsi kweemitha ezili-1.2 ukuphakama, abantu abadala abaneengxaki zokuhamba kunye nabantu abakhubazekileyo kufuneka badlule emnyango ngoncedo lomlindi.
6. Nceda ungahlali kumnyango ococekileyo ixesha elide kwaye ungafaki naziphi na izinto eziphazamisayo emnyango.
7. Kwimeko yokusilela kwamandla, nceda uvale umnyango kuqala kwaye utyhale ucango ngesandla.
Ngaphambili: Ucango lwephaneli ye-HPL yokugungxula umnyango we-laminate wesibhedlele
Okulandelayo: Umsebenzi womlilo kufutshane nocango lwentsimbi engenasici Ucango lwentsimbi yonyango lwentsimbi
umnyango wemveliso yezithambiso
umnyango wemveliso yokutya